धो का दिने श्रीमानलाई देखाउन कै लागि भएपनि अर्को विवाह गर्छु ! – List Khabar
Home / समाचार / धो का दिने श्रीमानलाई देखाउन कै लागि भएपनि अर्को विवाह गर्छु !
धो का दिने श्रीमानलाई देखाउन कै लागि भएपनि अर्को विवाह गर्छु !
admin February 7, 2022 समाचार Leaveacomment 102 Views
काठमाडौं, म निजी विद्यालयमा शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माविमा पढाउनुहुन्थ्यो । दुई छोरा छोरी । काठमाडौंमा एउटा पुस्तैनी घर । हाम्रो भागमा बस्नलाई तीन कोठा । हामीलाई पर्याप्त थियो । घरभाडा तिर्नु नपर्ने भएकाले दुई बूढाबूढीको कमाइ एकदिन श्रीमानले के के सुनेर आउनुभयो, अनायास नै राति इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो ।
त्यो दिनदेखि त सधैजसो इजरायलका बारेमा केही न केही नयाँ कुरा ल्याएर मलाई सुनाउन थाल्नुभयो । एकदिन मैले झर्को मान्दै भनें, ‘हामीलाई के काम इजरायलको गफ । नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु ।’‘किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल । अब त केटाकेटी पनि ठूला हुँदै गए, भोलि उच्च शिक्षाका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हाम्रो कमाइ थोरै छ, होइन बरू म यहाँ केटाकेटी स्याहारेर बस्छु, हाम्रो पनि आथिर्क हैसियत अलि उकालौं । सधै यही तीन कोठामा जिन्दगी बिताउने ?
भोलिका दिनमा छोराछोरीको विवाह पनि त गर्नुपर्छ, सोच न ।’श्रीमानले दिनहुँ ममाथि इजरायल पठाउने दबाब बढाउन थाल्नुभयो । आखिरमा हार खाएर मैले हुन्छ भन्नुपर्‍यो । विद्यालयमा राजीनामा दिन लगाएर त्यसबाट आएको पैसा नै एजेन्सीलाई बुझाएर उहाँले मलाई इजरायल जाने व्यवस्था मिलाइदिनुभयो । सही र गलत बाटो छुट्याउन नसक्ने उमेरमा पुगेका छोराछोरी अर्थात् अभिभावकको बढी आवश्यकता हुने बेलामा नाबालकहरूलाई छाडेर म इजरायल गएँ ।
इजरायल आएपछि पनि मेरो दिनहुँ फोनमार्फत कुरा हुन्थ्यो परिवारसित । कहिल्यै श्रीमान र छोराछोरीबाट टाढा नभएकी म एक्कासि सात समुद्रपारि पुगेकी थिएँ । मनलाई सम्झाउन निकै कठिन भैरहेको थियो । इजरायलमा काम गर्न र एडजस्ट हुन निकै कठिन भयो । नेपालमा नोकर राखेर बसेकी म यहाँ एक बिरामीको दिसासमेत धोइदिनुपर्ने नोकर्नी भएकी थिएँ । केयर गिभर भनिएपनि म घरकी नोकर्नी नै थिएँ । सुरुसुरुमा त कति रोएँ कति । तर के गर्नु सबै भताभुङग बनाएर म त्यता पसेकी थिएँ । फकिर्एर फेरि के गर्ने ? मेरो तलब आएकै दिन म सबै पैसा श्रीमानलाई पठाइदिन्थें ।
मलाई खान बस्न पैसा खर्च नहुने । एकदिन पाउने बिदामा पनि त्यही घरमा काम गरिदिए अतिरिक्त आम्दानी हुने हुँदा फोन गर्न र सानोतिनो खर्च त्यही पैसाले पुगिहाल्थ्यो । मेरो महिना सुरु हुन नपाउँदै श्रीमानको लिस्ट आइहाल्थ्यो । म कहिलेकाहीँ भन्थें ‘जुन उद्देश्य लिएर म त्यहाँ पुगेकी छु, त्यो पहिले पूरा गरौं । यसरी फाल्तु खर्च किन गर्ने ?’ ‘तिमी तीन–चार वर्ष बसिहाल्छयौ, त्यहाँ पैसा भैहाल्छ, हाम्रा योजनाहरू पूरा गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ।
जे होस अब नेपाल फकिर्एपछि त आफ्नै स्कुल हुन्छ भन्ने लागेको थियो । फागु पूणिर्माका दिन छोराले फोनमा रुँदै भन्यो, ‘मामु, बुबाले बर्बाद गर्नुभयो ।’ ‘के भयो, किन रोएको, के गर्नुभयो बुबाले ?’छोराले बोल्न सकेन । फोनमा छोरीको फेरि आवाज आयो । ‘मामु बुबाले त अर्की विवाह गर्नुभएको रहेछ । आज रक्सी खाएर एउटा सानो बच्चालाई लिएर आउनुभएको थियो । हजुरबुबा–हजुरआमालाई हजुरहरूको नाति भनेर चिनाउनुभयो ।
हामीलाई तिमीहरूको भाइ हो भन्नुभयो । हजुरआमाले रिसाउँदै हकारेपछि बुबाले विवाह गरेको नै दुई वर्ष भै सकेको भन्नुभयो । तपाईलाई थाहा नहोस् भनेर नै बुबाले इजरायल पठाउनुभएको रे ।’ म छाँगाबाट खसेझैं भएँ । विगतका दिनहरू सबै नाच्न थाले आँखाअगाडि । ओहो, आज आएर सम्झदैछु । त्यो समयमा एकाएक आएको परिवर्तन झल्भली भयो ।
कसरी मलाई इजरायल पठायो ? कसरी मसितबाट सबै पैसा लियो ? सबै एकै पटक मथिगंलमा घुमे । मैले सासूसित कुरा गरें । सासूले पनि हो भन्नुभयो । श्रीमानलाई फोन गरें । फोन अफ छ । छोराछोरी रोएका रोयै छन् । चार दिनपछि राति श्रीमानको फोन उठ्यो । तर महिलाले फोन उठाइन् । मैले ‘तपाईं को ?’ भनेर सोधें । उनले भनिन् ‘म दिनेशकी श्रीमति’ ‘दिनेशकी श्रीमति त म पो हुँ, तिमी को हौ ? दिनेश खोइ ?’ यति भन्नासाथ फोन काटिदिइन् । घरमा छोराछोरी मात्र थिए ।
सासू–ससुरासित पहिल्यै छुट्टिसकेकाले केटाकेटी आफै पकाएर खान्थे । म इजरायलबाट तुरुन्त आउन सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ । ऋण भएकाले नेपाल आएर पनि के गर्ने ? माइतीमा फोन गरेर भाइसँग रोएँ । भाइलाई स्कुलमा लगानी के कति छ बुझ भनें । मैले पठाएको पैसा स्कुलमा लगानी भएको त रहेछ तर सेयर होल्डरमा त कान्छी श्रीमतिको नाम रहेछ । क्यान्टिन पनि उसैले चलाएकी थिई । एउटा डान्स रेस्टुराँमा नाच्ने केटी ल्याएको रहेछ ।
मेरो पैसाले कान्छीको नाममा सेयर किनिदिएछ । अनपढलाई फेरि नाच्न त पठाउनु भएन भनेर होला क्यान्टिन खोलिदिएको । जे होस्, म र छोराछोरी बर्बाद भएका थियौं । छोराछोरीलाई सम्झाएँ । पढाइमा मन लगाऊ भनें । तर उनीहरूको पढाइ के भयो होला ? मैले जतिसक्दो चाँडो ऋण तिरेर नेपाल र्फकने कुरा भाइलाई सुनाएँ । भाइले भन्यो, ‘दिदी, हामी भान्जा भान्जीलाई ल्याएर राख्छौं, तिमी भोलिको दिनलाई पनि केही आफ्नो व्यवस्था गरेर मात्र फर्क ।’ दिन बित्दै गए । ऋण पनि तिरियो । म घर र्फकन्छु भन्दै थिएँ ।
छोराले फोनमा भन्यो ‘तिमीहरू मामा घरमा गएर बस म र सानीआमा यहाँ बस्छौ भनेर बुवाले भन्नुभयो, हामीले मानेनौं ।’ अब त्यो घर पनि गयो भने त बस्ने बास पनि हुँदैन । मैले छोराछोरीलाई मामाघर पनि नजाओ कोठा पनि नछोड भनें । यसबीच छोरीले एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । छोरो कुलतमा लाग्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । मेरो त सब बर्बाद भैसकेको थियो । विवाहको रातदेखि अहिलेसम्म श्रीमानले मसित गरेको माया, सरसल्लाह, भावी योजना सबै सिनेमाका रिलझैं मेरा सामु नाचिरहेका थिए । म इजरायल आएको चार वर्ष भयो ।
छोराछोरी दुवै कलेज पढ्दैछन् । घरमा बाबु र सानी आमालाई आउन दिएनन् । छोरीको फोन आयो, उनले विवाह गर्ने रे । आफूसँगै पढ्ने पोखरा घर भएको केटासित । भनि ‘मामु आएर मेरो विवाह गरिदिनू ।’ म दसंैमा घर आएँ, नवमीको दिन छोरीको विवाह गरिदिएँ । बाबु आए । कान्छीलाई भने ल्याएका थिएनन् । तर छोरो साथै थियो । हाम्रो बोलचाल पनि भएन । छोरी घर गई । छोरो पनि इन्डिया पढ्न जान्छु भन्दैछ । भोलि उसको पनि विवाह होला । त्यसपछि मेरो साथमा को त ? छोराछोरी श्रीमान सब पर । एक मन भन्छ, समय अनुसार चल्नैपर्ने मान्छेको नियति हो ।
जब मान्छेले सत्यबोध गर्छ उसलाई कुनै कुराले दुखाउँदैन । मलाई पनि त्यस्तै भैरहेको छ । जिन्दगी एकपल्ट मिल्छ, एउटा असल व्यक्तिसित विवाह गरूँ कि ? जब श्रीमानको जरुरत बढी पर्छ, त्यतिबेला मलाई धोका भएको थियो भने मैले उसको नाम लिएर किन बस्ने ? तर समस्या केटालाई केटी फकाउन सजिलो हुन्छ होला र त दोश्रो विवाह सजिलै गर्छन् । तर म कसलाई भनूँ मसित विवाह गर्छौ भनेर ? के भन्ने सासुलाई ? नयाँ श्रीमान् चाहियो भन्ने ? मलाई धोका दिने श्रीमानलाई देखाउन भए पनि म अर्को विवाह गर्न चाहन्छु ।